बलिउडकी ड्रामा क्विन भनेर चिनिने बिगबोसमा प्रवेश गरेकी छन् । राखी रिल लाइफमा मात्रै होइन रियल लाइफमा पनि निकै बोल्ड छिन्, उनी आफ्नो मनको कुरा गर्नलाई कहिल्यै लाज मान्दिनन् ।
मिका सिंहसँग ‘किस’ र २०१४ मा लोकसभा चुनावमा लड्नेदेखि लिएर आफ्नो राजनीतिक पार्टी ‘राष्ट्रिय आम पार्टी’ शुरू गरेको कुरालाई कसले भुल्न सक्ला र ? उनी आफ्नो अन्तरंगका कुरा गरेर मानिसहरूलाई मनोरञ्जन गराउन पनि पछि पर्दिनन् ।
वास्तवमा २०१७ मा राखीले सबैलाई चकित बनाइन्, जब उनले नवविवाहित विराट कोहली र अनुष्का शर्मालाई कन्डम उपहारमा दिन चाहेकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘विराट कोहली–अनुष्का शर्मा सबैभन्दा प्यारा जोडी हुन्, उनीहरूले भर्खरै वैवाहिक जिन्दगीमा कदम राखेका छन् । म उनीहरूलाई कन्डम उपहार दिन चाहन्छु, ताकि उनीहरू सुरक्षित रहुन् र यो उत्पादनको अनुभव गरेपछि प्रतिक्रिया शेयर गरुन् । मलाई लाग्छ मेरो कन्डम खास छ ।’
उनी यहीँ रोकिइनन् । सरकारले कन्डमको विज्ञापनमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा पनि बोलिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले सन्नी लियोन वा विपासाको कन्डमको विज्ञापन सेन्सर गरेन । तर, जब राखी सावन्तको कन्डमको विज्ञापनको खबरले चर्चा पायो, सरकारले बिहान ६ देखि राति १० बजेको बीचमा कन्डमको विज्ञापनमा रोक लगायो । के सरकार डराएको हो ? कि सरकारलाई पहिलेदेखि नै विज्ञापनसँग समस्या छ ?’